धेरै मोटाउन मन छैन ? यसरी गरौँ मेन्टेन ! - Kendrabindu Nepal Online News
१५ श्रावण २०७६, बुधबार १३:००
न मोटो न दुब्लो । ठिक्कको, चिटिक्कको अनि सुन्दर । आकर्षक शरीरको चाहना कसलाई पो नहोला र ? तर सबै कुरा सोचेजस्तो भइदिँदैन, भुँडी भ्यात्त निस्कन्छ भिलेन बनेर ।
हरेक वर्ग अनि उमेर समूहका मानिस सुन्दरताप्रति चासो राख्छन् । फरक के भने कसैले चाहना व्यक्त गर्छन् त कसैले गर्दैनन् । व्यक्त नगर्नेहरू भित्रभित्रै दुःखी हुन्छन् । व्यक्तित्वलाई आकर्षक बनाउने क्रममा केही सीप नचलेपछि आफैंभित्र धेरै प्रकारका गुनासा थुपारेर बस्छन् ।
स्वास्थ्य एवं सुन्दरताको प्रमुख शत्रु हो मोटोपन । खासगरी हामीकहाँ ४० कटेका महिला तथा पुरुषहरू पछिल्लो मोटोपनबाट पीडित देखिन्छन् । त्यसैले त हरेक बिहान मर्निङ वाक गर्नेदेखि योग र जुम्बा चहार्ने मात्र होइन जीम गर्न धाउनेहरूको संख्या बढ्दै छ, त्यसरी चहार्नेको एउटै उद्देश्य हुन्छ–आफूलाई आकर्षक बनाउने, पेट घटाउने, स्लिम बन्ने ।
के यो सम्भव छ ? पक्कै छ । नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्–‘असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ ।’
प्रयास गरे पूरा नहुने केही कुरो छैन । तर यसका लागि त्यसको कारण पहिल्याएर उचित उपाय अपनाउनुपर्छ ।
–कुनै पनि बेला (बिहान, दिउँसो र बेलुका) को खाना छाड्नु हुँदैन । बिहानको ब्रेकफास्ट त छाड्नै हुँदैन । ब्रेकफास्टमा सकेसम्म बढी प्रोटिन हुनु पर्छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार प्रोटिनयुक्त खाजाले तौल घटाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले ब्रेकफास्टमा अण्डा, फलफूल, सिरियल्स (कर्न फ्लेक्स), दही तथा ग्रीन टी समावेश हुनु राम्रो मानिन्छ ।
–छोटो समयको अन्तरमा केही न केही खाइरहनु पर्छ । धेरै बेरसम्म पेट खाली भयो भने ग्याँसको समस्या हुन्छ । यसबाहेक राम्ररी ब्रेकफास्ट नगर्नाले दिउँसोको खाना धेरै खाने सम्भावना हुन्छ ।
– दिउँसोको खाना खानुभन्दा करिव आधा घण्टाअघि केही फलफूल खानुपर्छ । फलफूलले खाना पचाउन सहयोग गर्छ खाली पेटमा फलफूल खानाले शरीरले ऊर्जा प्राप्त गर्छ ।
–गर्मी मौसममा दिनको करिब ८ देखि १० गिलास पानी पिउनु पर्छ । यद्यपि, खाना खाइरहेको बेला भने पानी पिउनु हुँदैन । खाना खाँदा पानी पिउने बानी छ भने त्यसले हाम्रो पाचन प्रक्रिया सुस्त पार्छ । त्यसैले खाना खाँदै गर्दा धेरै पानी पिउनु हुँदैन । पानी पिउनै छ भने खाना खानुभन्दा कम्तीमा २० मिनेट अघि अथवा पछि पिउन सकिन्छ ।
–खानेकुरालाई राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ । एउटा अनुसन्धानले के प्रमाणित गरेको छ भने हामी खानालाई चपाउन जति समय खर्च गरिन्छ, शरीरले त्यति नै कम क्यालोरी ग्रहण गर्छ ।
–लामो समयसम्म खाना चपाउँदा मस्तिष्कमा समेत पेट भरिसकेको छ भन्ने सन्देश जान्छ । यसो भएपछि थोरै खाइन्छ । तसर्थ खानाको प्रत्येक गाँसलाई कम्तीमा ३५ देखि बढीमा ५० पटकसम्म चपाउनु पर्छ ।
–खाने बेलामा दशतिर ध्यान दिनु हुँदैन । अरू कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । अरू कुरामा ध्यान दिँदा ध्यान खानाबाट अन्यत्र जान्छ र आवश्यकता भन्दा बढी खाइन्छ ।
–राति ८ बजेपछि गरिष्ठ भोजन गर्नु हुँदैन । बेलुकी सकेसम्म कम क्यालोरीयुक्त खाना खानु पर्छ । सुप अथवा झोल पदार्थमा जोड दिनु पर्छ ।
–बिहान होस् अथवा साँझ, हरेक दिन हिँड्नु पर्छ । त्यसरी हिँड्दा कसैसँग कुरा गर्नु हुँदैन । कम्तीमा २५ मिनेटसम्म लगातार हिंड्नुपर्छ । एक किलोमिटर हिँड्नका लागि १० मिनेटभन्दा बढी समय लगाउनु हुँदैन ।
–हरेक दिन एकै प्रकारको व्यायाम गर्ने हो भने त्यसबाट शरीरले फाइदा पाउँछ । यद्यपि, त्यसले तौलमा भने फरक पार्दैन । त्यसैले तौल नै घटाउन मन भए जिमशाला नै धाउनु पर्छ ।
–हरेक दिन एकै स्थानमा हिँड्नु हुँदैन ।
–एकै पटक ३० मिनेटसम्म व्यायाम गर्ने समय छैन भने दिनको तीन पटक १०–१० मिनेटका दरले व्यायाम गर्न सकिन्छ ।
– सोडा अथवा कार्बोनेटेड ड्रिंक्सको साटो फ्रेस जूसलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
–कुकिज, चिप्सजस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन, फलफूल, जुस अथवा ड्राई फुड खान सकिन्छ ।
–ह्वाइट ब्रेडको साटो ब्राउन ब्रेड उपयुक्त हुन्छ ।
– फास्टफुड, क्यान फुड, प्याक्ड फुड, फ्रोजन फुड तथा ओवर कुक्ड फुड सेवन गर्नुहुँदैन । हरेक दिनको खानमा फलफूल, ग्रीन सलाद आदिलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
–एक साताको टाइम टेबल बनाएर आफ्नो तौल बढेको छ भने के कुराले बढायो अथवा घटेको छ भने के–के गरेर घट्यो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ । तौल बढाउने कुरा भेटियो भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ । तौल घटाउने कुरालाई नियमित गर्नुपर्छ । छोटो समयमै धेरै तौल घटाउने सपना देख्न छाड्नुपर्छ ।
–तीस वर्ष कटेपछि नियमित रूपमा आफ्नो तौल परीक्षण गरिरहनुपर्छ । केही किलो तौल बढ्नेबित्तिकै त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
डाइटिङ, डिप्रेसन, फास्टफुड, स्वास्थ्य
Prevमहाभारतका रहस्यमयी महिला पात्रहरू
सुन्दरी ‘राजकुमारी’ पूर्णिकाको ३ सुन्दर पक्ष (भिडियोसहित)Next